SXSW 2014 Famonosana Infographic Interactive | Martech Zone
Talata, Martsa 18, 2014 Alakamisy, Jona 18, 2015 Jenn Lisak Golding
Iray amin'ireo zavatra mahafinaritra momba ny mpiara-miasa amin'i Meltwater's rindrambaiko fanaraha-maso media sosialy dia ny ahafahanao manara-maso tsara ny lohahevitra sy ny hetsika mba hahazoana sary feno momba ny fahatsapana sy ny lazany. Nanomboka izy ireo tamin'ity taona ity fanaraha-maso ny buzz manodidina an'i SXSW tamin'ny 26 Febroary ary nahita fironana mahaliana vitsivitsy:
Ny mpanao gazety NSA, Edward Snowden, dia raharaha lehibe. 7% amin'ny buzz ara-tsosialy rehetra dia mifandray amin'i Snowden.
Betsaka ny zavatra navoakan'ny lehilahy ho an'ny fiarahamonina: 62% raha 38% ho an'ny vehivavy.
Justin Bieber dia nilaza 400% bebe kokoa noho ny Grumpy Cat! (Lazao whaaaa?)
Ho an'ireo statistika mahafinaritra rehetra dia zahao ny sary eto ambany. Ary aza adino ny mijery ny mpanohana an'i Meltwater's fitaovana fanaraha-maso ny media sosialy ho an'ny orinasa.
Mar 18, 2014 amin'ny 11: 55 AM
Tsy dia betsaka momba ny mozika vaovao na teknolojia vaovao. Tsy hitako izay firesahana momba ny zava-nitranga mampalahelo (3 aina nafoy) tamin'ny SXSW 2014. Tena mitantara.
Mar 18, 2014 ao amin'ny 3: PM PM
Hey John - Fanontaniana tsara. Namokatra an'ity infographic ity aho, ka hamaly aho: nanara-maso manokana ny ampahany amin'ny fihaonambe izahay, izay nanomboka ny 7-11 martsa. Noho izany, tsy miresaka momba ny loza mahatsiravina nitranga tamin'ny 12 martsa izahay. Miombon-kevitra izahay fa mahaliana fa tsy nisy resaka momba ny teknolojia vaovao nandritra io fe-potoana io. Ary, amin'ny maha-olona iray tao amin'ny Reniranon'i Mena 2 andro talohan'io voina mahatsiravina io, ny foko dia mankamin'ny olona rehetra voakasik'izany.